इजरायली सत्तामा १२ वर्ष समय राज गरेका नेतान्याहुको पद गुम्यो, नाफ्ताली बेनेट नयाँ प्रधानमन्त्री – Gundruk Khabar
इजरायली सत्तामा १२ वर्ष समय राज गरेका नेतान्याहुको पद गुम्यो, नाफ्ताली बेनेट नयाँ प्रधानमन्त्री
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting at the Prime Minister's office in Jerusalem, May 6, 2018. Jim Hollander/Pool via Reuters - RC16EF2831D0
एजेन्सी, ३१ जेठ । इजरायलको सत्तामा १२ वर्ष समय राज गरेका बेन्जामिन नेतान्याहु विरुद्द संसद्ले नयाँ नेता निर्वाचित गरेपछि उनले प्रधानमन्त्री पद गुमाएका छन्।
दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी नाफ्ताली बेनेटले ‘परिवर्तनको सरकार’ को नेतृत्व गर्दै शपथ ग्रहण गरेका छन्। अत्यन्तै साँघुरो ६०-५९ बहुमतका आधारमा अभूतपूर्व गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै बेनेट संसद्‌बाट प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन्।
सत्ता समीकरणसम्बन्धी सम्झौताका अनुसार उनी सन् २०२३ को सेप्टेम्बर महिनासम्म प्रधानमन्त्री रहने छन्। त्यसपछि उनले येश अटिड पार्टीका नेता याएर लापिडलाई अर्को दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नेछन्।
नेतान्याहु इजरेलका हालसम्मकै सर्वाधिक लामो समय सत्तामा रहेका नेता हुन्।
इजरेलको राजनीतिमा वर्षौंसम्म वर्चस्व कायम राखेका उनी दक्षिणपन्थी लिकुड पार्टीको प्रमुख तथा विपक्षी दलको नेता रहने छन्।
संसद्‌मा भएको छलफलमा बोल्दै नेतान्याहुले भने, “हामी फेरि फर्किने छौं।”
मतदान सकिएपछि बेनेटतर्फ हिँडेर गएका उनले प्रधानमन्त्री निर्वाचित उनीसँग हात मिलाएका थिए।
तर प्यालेस्टिनीहरूका प्रतिनिधिले इजरेलको नयाँ सरकारलाई खासै चासो नदिने किसिमको प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
“यो इजरेलीहरूको आन्तरिक मामिला हो। हाम्रो धारणा स्पष्ट छ। हामी सन् १९६७ को सिमानामा आधारित र जेरूसलेम राजधानी रहेको प्यालेस्टिनी राज्य चाहन्छौं,” प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासका एक जना प्रवक्ताले भने।
गाजामा नियन्त्रण जमाएको हमास समूहका प्रवक्ताले इजरेललाई एउटा उपनिवेशवादी निकाय भन्दै बलको प्रयोग गरी प्रतिरोध गरेर आफ्नो अधिकारहरू फिर्ता लिनुपर्ने बताए
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले बेनेटलाई बधाई सन्देश पठाउँदै आफूले उनीसँग काम गर्न चाहेको बताएका छन्।
नेतान्याहुले अब के गर्लान्?
बीबीसीका मध्यपूर्व संवाददाता टोम बेट्मन भन्छन्, “पुराना बानीहरू त्याग्न गाह्रो हुन्छ।” उनका अनुसार विश्वासको मतको परिणाम घोषणा भएपछि बेन्जामिन नेतान्याहु संसद् भवनभित्र प्रधानमन्त्री बस्ने चेम्बरमा गएर बसेका थिए।
खासमा उनी विपक्षी बस्ने बेन्चमा बस्नुपर्ने थियो। बेट्मनका विचारमा इजरेलका सर्वाधिक लामो समयका नेताको बहिर्गमन एउटा राजनीतिक इतिहासको क्षण थियो। तर उनी तत्कालका लागि कतै पनि जाने देखिँदैनन्।
नेतान्याहुले विपक्षीको रूपमा नयाँ गठबन्धन निर्माण र अहिलेको गठबन्धन तोड्ने प्रयास जारी राख्ने छन्।
यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा बृहत् गठबन्धन भएकाले अझ अस्थिर हुनसक्ने सम्भावना छ। नाफ्ताली बेनेटले सबै दललाई एक ठाउँमा उभ्याएर अघि बढ्नुपर्नेछ।
यस्तो किन भयो?
नेतान्याहुले पाँचवटा कार्यकाल शासन गरेका छन्। सबैभन्दा सुरुमा सन् १९९६ देखि १९९९ सम्म सत्ता सम्हालेका उनी सन् २००९ देखि २०२१ सम्म निरन्तर शक्तिमा छन्। सन् २०१९ को एप्रिलमा उनले चुनाव घोषणा गरेका थिए।
तर त्यसमा उनी नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने गरी पर्याप्त मत पाउन विफल भएका थिए। त्यसपछि गरिएका दुईवटा चुनाव पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्।
तेस्रो चुनावपछि उनले तत्कालीन विपक्षी नेता बेनी गान्त्ससँग मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाए। तर, उनीसँग गरेको सम्झौता भङ्ग भएपछि गएको मार्चमा इजरेल पुन: चुनावमा गएको थियो।
उक्त निर्वाचनमा लिकुड ठूलो दलका रूपमा निर्वाचित भए पनि नेतान्याहुले फेरि सरकार गठन गर्न सकेनन्। त्यही भएर दोस्रो स्थानमा आएको येश अटिड पार्टीका नेता लापिडलाई सरकार बनाउन बोलाइयो।
नेतान्याहु सत्तामा बसिरहेको विरोध गर्ने समूहहरू सबै एक ठाउँमा उभिए। त्यसमा वामपन्थीदेखि मध्यपन्थी वा लिकुडसँग मिल्दोजुल्दो विचार राख्ने यामिना सहितका दक्षिणपन्थी दल पनि थिए।
सात सिटमात्र जितेर निर्वाचनमा संयुक्त रूपमा पाँचौ स्थानमा आएको यामिनाको समर्थन नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि अनिवार्य थियो।
हप्तौँको सघन वार्तापछि लापिडले नेतान्याहुलाई पदबाट मुक्त गर्ने साझा उद्देश्य सहितको गठबन्धन निर्माण गरे।
आठवटा समूहले गरेको उक्त सम्झौता सरकार गठनका लागि समर्थन जुटाउन दिइएको जुन २ को समय सीमा सकिनु आधा घण्टा अघिमात्रै हस्ताक्षर गरिएको थियो। बीबीसीबाट
ओलम्पिकमा परियारले महिला एयर राइफलमा बनाईन राष्ट्रिय कीर्तिमान
टोकियो ओलम्पिक, नेपालका खेलहरु आजबाट
आजबाट लामो दुरिका सवारीसाधन चल्ने